Ingqondo Yakho Yeyethu | Martech Zone
Ingqondo Yakho Yeyethu
NgeCawa, ngo-Epreli 20, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Kwezi veki zimbalwa zidlulileyo bendichola kwaye ndibeka ezincwadini-enye yazo ibingu-The Big switch, ngo UNicholas Carr. Namhlanje, ndigqibile ukuyifunda le ncwadi.
UNicholas Carr wenze umsebenzi omangalisayo ekwakheni ukufana phakathi kokuvela kwegridi yamandla ombane kweli lizwe kunye nokuzalwa kwecomputer yelifu. Kwinqaku elifanayo, iWired inenqaku elikhulu, elibizwa ngokuba yiPlanethi yeAmazon, kupapasho lwayo lwangoMeyi 2008 oluchaza ibali lamafu eAmazon. Qiniseka ukuba uyayijonga. Iintambo zibhekisa kumnikelo weAmazon njengeHardware njengeNkonzo (HaaS). Ikwabizwa ngokuba sisiBonelelo njengeNkonzo (IaaS).
Ngelixa ndiqhwabela izandla ukuqonda kukaNicholas kwikhompyuter yelifu kunye nekamva lokuba 'siza kukhula njani kungekudala, ndothuka xa wayeqala ukuxoxa ngezinto ezingenakuphepheka ulawulo iikhompyuter zinokuba ngaphezulu kwethu njengoko siqhubeka sizidibanisa- nangokwezinto eziphilayo. Incwadi ithatha inyani ngaphandle kwintsebenzo yabathengisi abayiphumezayo ngoku ekufumaneni idatha- kwaye phantse ithathe ujonge eloyikisayo ukuba le nto inokuba yeyiphi kwixesha elizayo.
Ngalo lonke ixesha sifunda iphepha lesicatshulwa okanye sicofa ikhonkco okanye sibukele ividiyo, ngalo lonke ixesha sibeka into kwinqwelo yokuthenga okanye senza uphando, ngalo lonke ixesha sithumela i-imeyile okanye sincokola kwifestile yemiyalezo ekhawulezileyo, siyazalisa "kwifomu yengxelo." … Sihlala singazi ngemisonto esiyijikayo nendlela esetyenziswa ngayo. Kwaye nokuba besinolwazi lokujongwa okanye ukulawulwa, sisenokungakhathali. Emva kwayo yonke loo nto, sikwaxhamla kubuntu obenziwa yi-Intanethi-busenza abathengi nabasebenzi abagqibeleleyo. Samkela ulawulo olukhulu ngokubuyisela ukulunge ngakumbi. Iwebhu yesigcawu yenzelwe ukulinganisa, kwaye asonwabanga ngaphakathi kuyo.
Ukunyanzelisa kwaye ulawulo ngamagama awomeleleyo endingenakuvumelana nawo. Ukuba ndingasebenzisa idatha yabathengi ukuzama ukuqikelela ukuba bafuna ntoni, andibalawuli okanye ndibaphathe kakubi ekuthengeni. Endaweni yokuba ndibuyise idatha, ndizama ukubabonelela ngento abanokuyikhangela. Oko kusebenza kuwo onke amaqela abandakanyekayo.
Ulawulo luya kubonisa ukuba ujongano ngandlel 'ithile loyise inkululeko yam yasimahla, eyintetho engenangqondo. Sonke singamaZombi angenangqondo kwi-Intanethi angenakho ukuzikhusela kwintengiso ebekwe kakuhle? Ngokwenene? Kungenxa yoko le nto ezona ntengiso zibalaseleyo zifumana kuphela amaxabiso okukodwa.
Ngokubhekisele kwikamva lomntu kunye nokudityaniswa komatshini, ndinethemba malunga nalawo mathuba. Khawufane ucinge xa ​​ukwazi ukufikelela kwinjini yokukhangela ngaphandle kwemfuneko yebhodibhodi kunye nonxibelelwano lwe-Intanethi. Abantu abanesifo seswekile baya kuba nakho ukubek 'esweni amanqanaba eswekile yegazi KANYE nokuchonga okona kutya kulungileyo banokukutya ukubonelela ngesondlo. Ekutyeni? Mhlawumbi unokubeka iliso kwindlela otya ngayo ikhalori yakho yemihla ngemihla okanye ubale amanqaku abaLindi bokuTya njengoko usitya.
Inyani yile yokuba sinolawulo oluncinci kakhulu kuthi, ungaze ukhathazeke AI. Sinehlabathi elinamandongomane ezempilo alambisa imizimba yawo, asebenzise amandongomane aphelisa amalungu awo, amakhoboka axoka, ayakopela kwaye ebe ukuze alungise… njl.
Ukukwazi ukutsiba usebenzisa ikhibhodi kunye nokubeka iliso kunye 'nokungena' kwi-Intanethi ayisiyonto yoyikisayo kum kwaphela. Ndiyakwazi ukukuqonda oko ulawulo ligama elisetyenziswa ngokukhululekileyo kwaye, nabantu, alisoze liyinyani. Asikaze sikwazi ukuzilawula-kwaye oomatshini abenziwe ngabantu abanakuze boyise umatshini ogqibeleleyo ohlanganiswe nguThixo ngokwakhe.
Utshintsho olukhulu lufundwe kakuhle kwaye ndingakhuthaza nabani na ukuba aluthathe. Ndicinga ukuba imibuzo ephakamisayo kubukrelekrele bezinto ezingezizo zilungile, kodwa uNicholas uthatha umbono othusayo ngeli thuba kunokuba abe nembono ethembisayo malunga nento eza kuyenza kunxibelelwano lomntu, imveliso kunye nomgangatho wobomi.
tags: ikhalendaphikisana neengcamangoukudalwa komxholoulawulo lomsithoiqonga lomsithoikhalenda kaGoogleboku-ipirate bay
Verizon: Nceda uyeke ubugeza
Epreli 20, 2008 ngo-8: 59 PM
Ndenza indlela yam ngencwadi kaNick ngokunjalo .. ukuza kuthi ga ngoku kuye kwaba kukufunda okumnandi- ngethemba lokuba kuya kuhlala kunjalo
Epreli 20, 2008 ngo-9: 17 PM
UNicholas ubonakala ngathi uyinto enqabileyo kwihlabathi lobuchwephesha, kodwa ndiyakonwabela ukufunda zombini ibhlog yakhe kwaye ndiyithandile le ncwadi. Kutshanje, nditsaleleke ngakumbi kwiincwadi zembali kunezinye- kwaye uNicholas wanika umbono ophucukileyo kwimveliso yamandla kunye nokufana kwikhompyuter.
Leyo yayiyeyona nto ndiyithandayo kule ncwadi kwaye ndicinga ukuba ukufana kwakhe kwakulungile. Nangona kunjalo, xa wayegqitha koko, izinto zaba mbi kakhulu. Ayisiyonto yokuba ulwazi yayingeyonto ekufanele ukuba sizikhathaze ngayo-kukuba ndicinga ukuba liwahoyile amathuba amangalisayo.
Yonwaba xa uyifunda - awunakulinda ukubona ukuba uyithatha nayo!
Epreli 21, 2008 ngo-8: 04 AM
Enkosi ngokuqonda. Ndiyavuma ukuba amaqhinga othusayo angazithengisa iincwadi
kubafundi be-novice, kodwa inyani kukuba iikhompyuter zixhobile
idatha..uyenzi kwaye ayizuku "lawula umhlaba" .. CrAzy !!!
Ukuthengisa iminyaka kwaye ndingoyiki iPC yam!